डलर अहिलेसम्मकै महंगो | Business and Economy of Nepal
डलर अहिलेसम्मकै महंगो
Posted on December 14, 2011 by Babukrishna	बाबुकृष्ण महर्जन
अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महंगो भएको छ । मंगलबार भारतीय रुपियाँ (भारु) अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर भएको र नेपाली रुपियाँको विनिमय दर भारुसँग स्थिर रहेकाले अमेरिकी डलर नेपाली रुपियाँको तुलनामा महंगो भएको हो । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलर बराबर ८५ रुपियाँ ६९ पैसा विनिमय दर तोकेको हो । गत मंसीर ७ गते डलरको भाउ सबैभन्दा बढी ८४ रुपियाँ २० पैसा पुगेको थियो । गत श्रावण १२ गते ७० रुपियाँ ७० पैसा रहेको डलरको भाउ मंसीर २७ सम्म आइपुग्दा तीन महिनाको अवधिमा करिब १५ रुपियाँले महंगो भएको छ । नेपालमा भारतीय रुपियाँको बजारको आधारमा डलरको भाउ तोक्ने गरिन्छ । मंगलबार अमेरिकी डलर बराबर ५३ भारतीय रुपियाँमा कारोबा भएको भारतीय न्युन एजेन्सीहरुले जनाएको छ ।
अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा सामान्यतया नेपालमा आयात गरिने सामानको मूल्य बढ्दछ । यसले भारतीय भूमिमा नै उत्पादन हुने सामाग्रीमा भने खासै फरक पर्दैन । तर भारतबाट सबैभन्दा बढी मात्रामा भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थमा भारतले पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर नेपालमा बिक्री गर्ने हुँदा नेपाल आयल निगमको घाटा भने अझ बढ्ने देखिएको छ । गत वर्षका कुल निर्यातबाट आएकाले रकम मुलुकको पेट्रोलियम आयात धान्न पनि अपर्याप्त थियो । महंगिदै गएकोले डलर मूल्यले निगमको घाटा अझै बढाउने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरेको खिम्ति र भोटेकोशीको बिजुली अझ महंगो हुनेछ । प्राधिकरणको कुल विद्युतको ४० प्रतिशत विद्युत आपूर्ति यी दुई आयोजनाले गर्दै आएको छ । डलर महंगिदै जाँदा अर्को असर देशको बजेटमा पनि पर्नेछ । ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानीको लागि छुट्याइएको रकम अपुग हुने हुँदा अन्य शिर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर वा अन्य शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कटौती गरेर भए पनि खर्च गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने ती विज्ञले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । डलर महंगिने क्रम जारी रहेमा सरकारले पुरक बजेट नै ल्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी समेत उनले दिए ।
अमेरिकी डलर महंगो हुँदाको प्रत्यक्ष फाइदा भने वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली दाजुभाईलाई हुनेछ । विदेशमा काम गर्दा सोही बराबरको डलर पठाए पनि नेपाल आउँदा ती रोजगारमा गएकाका आश्रितले बढी रुपियाँ पाउन सक्ने देखिएको छ । यसबाट नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाह अझ बढ्ने निश्चित छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २८ दशमलब ३ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर ७५ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल व्यवसायी, ट्राभल एन्ड टुर व्यवसायी भने डलर महंगिदा फाइदामा नै रहने छन् ।
अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल डलर बढ्दा नेपालमा महंगी झन बढ्ने बताउनुहुन्छ । नेपालमा उत्पादन एकदम न्युन भएकाले डलर बढ्दा आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने भए पनि त्यस्तो सुविधा नेपालले उपभोग गर्न नपाउने बताउनुहुन्छ । Share this:EmailTweetPrintShare on TumblrLike this:Like Loading...
Filed under: Money Market « लघु जलविद्युत आयोजनालाई दिएको ऋण विपन्न वर्ग कर्जा Country to lose billions due to nationwide strike »